ဥပဒေအသက်မရှိသော ၁၉၈၂ – ခုမြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။	Posted on December 30, 2012	by irrawadi ဥပဒေအသက်မရှိသော ၁၉၈၂ – ခုမြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.	← ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာသမိုင်း အထောက်အထား စာတမ်း : – In Respect Of The Fact The Local Islam’s Inhabitants Within Rakhine State Are Native Race And Citizen Of Myanmar Under Law : in English and Burmese version …